Wafdi uu hogaaminaayo ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo si deg deg ah ugu dhoofay Nairobi – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hogaaminaayo ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo si deg deg ah ugu dhoofay Nairobi
Wafdi uu hogaaminayo ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa gelinkii dambe maanta u dhoofay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Safarka ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo ahaa mid deg deg ah ayaa la sheegayaa inuu yahay mid uu ku doonayo in magaalada Nairobi uu dib uga bilaabo ololihiisa doorashada oo muddooyinkii dambe hoos u dhac weyn ku yimid
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa sidoo kale lagu wadaa in magaalada Nairobi uu kula kulmo mas’uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Dhinaca kale, shir jaraa’id uu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid shalay ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay in qaar ka mid dalalka deriska ah ay doorashada Soomaaliya fara-gelin weyn ku haayaan.
Sidoo kale, safarka ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa imaaanaya maalin kadib markii maxkamadda cadaaladda aduunka ee ICJ ay go’aamisay inay qaadi doonto dacwadda Badda ee u dhaxeeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Si kastaba ha ahaatee, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa haatan wajahaya ololaha doorashada madaxweynaha kii ugu darnaa ebed, iyadoona doorashadaasi ay dhici doonto 8-da bishaan Febraayo.